धरानका संक्रमित होम आइसोलेसनमै::Hamro Koshi Awaj / awaz
१७६ जना निको भए, ४ सय ‘एक्टिभ’ संक्रमितमा सामान्य लक्षण, बीपी पुग्ने ३-४ जना मात्रै, नेपालभर हप्तादिनदेखि निको हुने दर ७६.७ प्रतिशत
धरानः धरानमा कोभिडको दोस्रो लहर शुरु भएयता धरानमा ५८४ जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने धरानकै ८ जनाको मृत्युसमेत भइसकेको छ ।
अहिले धरानमा ४ सय जनामा संक्रमित होम आइसोलेसनमै छन् । धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य प्रतिष्ठान पुग्नेमा ३–४ जनाचाहिँ धरानकै पनि छन् । ५८४ जनामध्ये १७६ जनामा डिस्चार्ज भइसकेको धरान उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख उमेश मेहताले जानकारी दिए । ‘धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा धेरैजसो धरान बाहिरका संक्रमित मात्रै उपचाररत छन्’, उनले भने, ‘धरानमा रहेका संक्रमित होम आइसोलेसनमै छन् ।’
धरानमा रहेका संक्रमितमध्ये अधिकांशमा ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, पखाला लाग्ने लक्षण देखिएको उनले जानकारी दिए । ‘खासमा भन्ने हो भने अधिकांशमा सामान्य लक्षण मात्रै छ, स्वाद थाहा नपाउने , ज्वरो, रुघाखोकी, झाडापखाला लाग्ने पाइएको छ’, उनले भने, ‘२–३ जनाले सास फेर्न गाह्रो भयो पनि भनिरहेका छन्, उनीहरुलाई उचित परामर्श र बीपी प्रतिष्ठान पुग्नेसम्मको व्यवस्था गर्दै आएका छौं ।’
४ सयजनामध्ये कोही कोही भेन्टिलेटर चाहिने खालको अवस्था पनि आएको उनले जानकारी दिए । यसको लागि उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य महाशाखाले परामर्श दिने, बीपीमा भेन्टिलेटर खाली छ छैन, कतिखेर पठाइदिने आदिबारे सोधपुछ, एम्बुलेन्समा पठाउने काम समेत गर्दै आएको उनले जानकारी दिए । ‘पहिला हामी आफैंले पनि परामर्श दिँदैछौं, चिकित्सककै परामर्श चाहिए सम्पर्क गराइदिने गरेका छौं, गाह्रोसाह्रो हुनेलाई एम्बुलेन्स पठाएर सहयोग गर्दैछौं ।’ उनले थपे ।
उनले सबैको सहयोगले नै कोरोनालाई छिट्टै भगाउन सहज हुने बताए । ‘लकडाउन छ, केही समय नआत्तिऔंं, लखरलखर नडुलौं, घरमै बसौं, स्वास्थ्यको ख्याल गरौं, सकारात्मक सोंचौं, स्वस्थ खानेकुरा खाऔं, कोरोना सहजै भगाउन सकिन्छ ।’ उनले सुझाए ।
नेपालभरको अवस्था के छ ?
नेपालभरी पनि नेपालमा एकहप्ता यता कोरोना भाइरस संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या बढ्दै गएको छ । अघिल्लो हप्ता सोमबारदेखि हिजो आइतबारसम्म कोरोना भाइरस संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या बढ्दै गएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
आइतबार एकैदिन चार हजारभन्दा धेरै कोरोना सङ्क्रमणमुक्त भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार आइतबार चार हजार २२ जना कोरोना सङ्क्रमणमुक्त भएका हुन् । आठ हजार आठ सय ८५ जना कोरोनाका नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । थपिएका कोरोना संक्रमितको तुलनामा निको हुनेको दर ४५ दशमलव २६ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै, २१ गते सात हजार सात सय ७० जना नयाँ संक्रमित थपिएकामा एक हजार सात सय ७५ जना डिस्चार्ज भएका थिए । यो भनेको थपिएका संक्रमितमध्ये डिस्चार्ज हुनेको संख्या २३ दशमलव १७ प्रतिशत हो । २२ गते पनि २१ गतेभन्दा केही कम संख्यामा निको हुने प्रतिशत बढेको छ । २२ गते आठ हजार ६ सय ५९ जना नयाँ संक्रमित थपिएकामा एक हजार नौ सय ९३ जना अर्थात् २३ दशमलव ०१ प्रतिशत निको भएका थिए ।
दैनिक संक्रमितहरुको संख्या धेरै नघटे पनि निको हुनेको संख्या बढ्नु सुखद भएको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका डाक्टर शेर बहादुर पुन बताउँछन् । संक्रमितको संख्या धेरै भएकोले निको हुनेको संख्या कम जस्तो लागेको उनको भनाई छ । पीसीआर परीक्षण सँगै कोरोना संक्रमित बढ्दै गए पनि सावधानी अपनाउनुपर्ने तर आत्तिनु नहुने उनको सुझाव छ ।
समयमै उपचार नपाएका कारणले गएको वर्षभन्दा यो वर्ष मृत्युदर बढेको डाक्टर पुनले बताए । गएको वर्ष कन्ट्याक ट्रेसिङ भएको थियो । त्यसमा परेका सबैले जाँच गर्थे । जसका कारण लक्षण भएका बिरामी कम थिए । यो पटक भने लक्षण देखिएपछि मात्रै जाँच गर्ने र गाह्रो भएपछि मात्रै अस्पताल जाने क्रम बढेकाले मृत्युदर बढेको हुन सक्ने स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिर कुमार अधिकारीले बताए । संक्रमितहरुमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा धेरैमा सामान्य लक्षण छ । जुन गएको वर्षको आँकडासँग मिल्न जान्छ ।